SUSE Software Solutions Spain SL: zita shanduko muSpain | Linux Vakapindwa muropa
SUSE inotanga mashandiro azvino sekambani hombe yakazvimirira yakavhurika sosi yeindasitiri. Izvi zvakasimbiswa nhasi pamwe nekugadzirwa kwekambani yakazvimiririra yakavhurika sosi kambani mushure mekuwana kweSUSE na Swedish muongorori EQT kubva kuMicro Focus, sezvatakatotaura muLxA kare. Kutenda kunguva yazvino muindasitiri, kubudirira kwekushanda uye kuwedzerwa kwesimba rayo, SUSE ikozvino yave munzvimbo iri nani yekutarisisa pane izvo zvinodiwa nevatengi vayo uye vavanoshanda navo.
Uyu mutungamiriri wezve tekinoroji akatisiirawo dzimwe nhau dzine chekuita neichi chiitiko, kunyanya icho chine chekuita nacho kupatsanurwa muSpain. Uye ndeyekuti SUSE Spain inodaidzwa zviri pamutemo SUSE Software Mhinduro Spain SL. Pamusoro pezvese izvi, isu takadzidza kuti ivo vakawedzera yavo yepamusoro timu, vachiwedzera hutsva mabasa ehutungamiriri uye ruzivo kukurudzira kwavo kuenderera mberi mune ino nhanho nyowani yekusimudzira yemakambani.
Kune rimwe divi, isu tine kuti Enrica Angelone akagadzwa seCFO nyowani. Iyo SUSE COO chinzvimbo chichaitwa zvino naSander Huyts, naThomas Di Giacomo, aimbove COO SUSE tekinoroji, Iye zvino akatamira kunotora chigaro cheMutungamiri weEngineering, Chigadzirwa uye Innovation. Ivo vatatu ndivo vachazove vari ipapo ipapo pasi peECEO yeSUSE: Nils Brauckmann. Naizvozvo, ivo vachamhan'ara uye vane hukama hwakananga naye mukati mehutungamiriri hwebhizinesi.
Rutsigiro rweEQT nemamiriro azvino eSUSE anozobvumidza kambani ramba uchiwedzera, pamwe neayo matekinoroji vadyidzani kuti vape zvisingaenzaniswi masevhisi, uye ichienderera nekuvandudza uye kushandisa bhizinesi rezvese matekinoroji ari kubuda kuti arambe achipa hupiyona uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinogutsa vatengi varo mubhizinesi rezvebhizinesi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » SUSE Software Solutions Spain SL: zita shanduko muSpain